ADO fi PG7 – Haala Amma Itoophiyaa Keessa Jiru Ilaalchisee Ibsa Dhihaate : Oromo Democratic Front
Qabsoon wareegama lubbuu namoota kumaatamaan lakkaawamni gaafate kan uummattoonni Itoophiyaa bilisummaa, haqa, wlaqixxummaa fi dimookiraasii dhugaa mirkaneessuuf gaggeessaa jiran haalaan jabaatee itti fufuu bira darbee sadarkaa ol’aanaatti cehee jira. Yeroo ammaa uummattoonni Itoophiyaa qabsoo walhubannoodhaan gaggeessaa jiraniin toftaa qoqqoodanii bituu Wayyaaneen waggoota digdamii-shanan dabraniif itti gargaaramaa turte cabsuu danda’aniiru. Haala walii galtee fi waliif tumsuu irratii hundaawuudhaan diinni keenya inni guddaan sirna bittaa Wayyaanee fi hooggantoota sirnichaa warra kaayyoo isaanii qabeenya biyyittii saamanii sooromuu duwwaa godhatan duwwaadha jedhanii ifa godhanii ibsaniiru. Ilaalcha waliinii (tokkummaan qabsaawuu) kana irratti hundaawuudhaanis garaa garummaa tokko malee (sagalee tokkoon) sadarkaa itti fedhii isaanii ibsatan irra gahuu isaanii haala qabatamaa ta’een agarsiisaa jiru. Kuni dhugaa ta’uu mirkaneeffachuudhaafi ammoo gaffiiwwan, dhaadannoowanii fi ergaawwan hirmaattota qabsoo uummata Oromoo kan ji’oota kurnan drbaniif gaggeeffamaa turees ta’ee hirmaattota qabsoo uummata Amaaraa kan Gondorritti calqabamee babal’achaa dhufe irratti dhihaatan ilaaluun gahaa ta’a. Tokkummaadhaan qabsaawuu calqabuun uummattoota Itoophiyaa, keessumatti ammoo walii-galteen uummata Oromoo fi uummata Amaara jidduutti ta’aa jiru kuni hooggantoota Wayyaanee warra saamicha qabeenya biyyittii isa kaayyoo isaanii duraa taasifatanii irratti bobba’an bira darbanii ilaaluu hindandeenye yaaddoo guddaa keessa akka seensisee fi boqonnaa akka dhoowwe hubachaa jirra. Jechoota maddeewwan sab-quunnamtii tohannaa isaanii jala jiran irratti dhihaatanii darbatan irraa hubachuun kan danda’amus sodaa guddaa keessa akka seenanii dha. Fakkeenyaaf, uummattoota Oromoo fi Amaaraa kan akka obbolaatti wal ilaaluu isaanii ifa baasanii ibsanii fi “dhiigni isa tokkoo nuufis dhiiga keenya”; “gaaffiin uummata isa tokkoo nuufis gaaffii keenya” jedhan ilaalchisee abbaan taayitaa Wayyaanee tokko ennaa dubbatu uummatootni gurguddoon biyyittii lamaan kuni (Oromoo fi Amaarri) “diina walii waan ta’aniif uummattoota waliif galanii waliin dhaabbachuu hin dandeenye” sirumayyuu “abiddaa fi cidii” dha jechuun isaa yaaddoo fi sodaa hooggantootni Wayyaanee walii-galtee uummata gurguddoo lamaan kanaa irraa qaban ifatti mul’isa.
1. Biyya keenyaafis ta’ee uummata keenyaaf waan tolu fiduudhaaf qabsoo uummattoota Itoophyaatiin adeemsifamaa jiru haalan jabeessanii itti fufuudhaan sirna bittaa Wayyaanee hundee irraa buqqisuu malee filannaanni biraa hin jiru. Kanaafuu, Wayyaanee dhabamsiisuudhaaf tarkaanfiin walii galtee, waliif tumsuu fi waliin dhaabbachuu kan uummattoota Itoophiyaa jidduutti calqabame jabaatee itti fufuu qaba. Waliin dhaabbachuu uummattoota keenyaa jechuun Wayyaaneedhaaf badii waan ta’eef calqaba walii galtee kana booressuudhaaf yookii ammoo laaffisuudhaaf Wayyaaneen tarkaanfiiwwan fakkeessuu iratti hundaawan tokko tokko fudhattee yeroo bitachuudhaaf yaalii gochuun ishii ni mala. Tarkaanfii fudhachuu dandeessuu keessaa: ummata tokko isa tokko irratti kakaasuu, akka dhiheenya kana maddeewwan sab-quunnamtii tokko tokkoon dhagahame ammoo gaaffiiwwan uummataan dhihaatan keessaa kan murtaawan “gaaffiiwwan sirrii dha deebii argachuu qabu” jechuudhaan jijjiirama xixinnoo wayii gooneerra jettee uummata geeddarama hundee qabu fiduudhaaf kutatee ka’e deebi’ee akka taa’u taasisuu, namoota karaa adda addaatiin beekamoo ta’an tokko tokko malaan qabachuudhaan maqaa “araaraa buusuu” jedhuun uummata qabsoo eegalee fi mootummaa Wayyaanee jidduutti walii galteen akka taasifamuu yaaluu fi tarkaanfiiwwan biraas kan uummata qabsoo irraa akka duubatti deebi’u taasisan akka fakkeenyaatti kaasuun ni danda’ama. Tarkaanfiiwwan Wayyaanee kuni garuu, hunda caala mirga abbaa biyyuummaa koo fi bilisummaa koon gonfachuu barbaada jedhee uummata kutatee ka’e, kaayyoo ka’eef bakkaan gawuudhaaf ammoo wareegama lubbu baay’ee kaffale duubatti deebisuu hin qabu jenna. Walumaa galatti Wayyaanee taayitaa irraa buusanii sirna demookiraasii dhugaa ijaaruun kaayyoo keenya kan filannaa biraa hin qabne waan ta’eef qabsoo keenya jabeessinee itti fufuudhaan Wayyaanee dhabamsiisuu irratti akka xiyyeeffannu hubachiisuu barbanna
2. Sirni Wayyaanee amala ittiin beekamu keessaa inni guddaan ummata tokko diina uummata biraa fakkeessee dhiheessuudhaan uummattoota gara garaa jidduutti wal amanuu fi waliif galuun akka hin jiraanne taasisuu dha. Mala kana ammoo Wayyaaneen uummattoota teessumni lafa isaanii wal daangessu kan akka uummata Oromoo fi uummattoota Kibba Itoophiyaa tokko tokko, uummata Oromoo fi uummata Sumaalee fi KKF jidduutti itti gargaaramteetti. Wayyaaneen kana kan taasiftes ofuma shiitiif jidduu deemtee lolli daangaa uummattoota lama jidduutti akka dhalatu taasisuudhaan harka lafa jalaatiin ammoo isa tokko meeshaa waraanaa hidhachiiftee namoonni qulqulluun akka wal ajjeessanii diina walitti ta’an taasisuudhaani. Edda sana gooteen booda ammoo araarsituu uf fakkeessitee jidduu seenuudhaan ilaalcha yoo Wayyaaneen taayitaa mootummaa irra jiraachuu baatte “biyyi nagaadhaan jiraachuu hin dandeessu” ilaalchi jedhu akka jiraatu taasisuu yaalaa turte. Hooggantootni Wayyaanee har’as kana hin godhan jechuun waan hindanda’amneef uummattootni keenya itti dammaqanii akka ilaalan hubachiisuu barbaanna. Keessumaa ammoo waggoota digdamii-shanan darbaniif taayitaa mootummaa gara garaa fi hojja dhuunfaa gargaarsa mootummaa qabu irratti bal’inaan bobba’anii kan turan miseensonni fi deeggartoonni Wayyaanee komii daandii sirrii ta’een isaanitti dhihaatuuf hiika dhugaa hintaane kennuudhaan sochiiwwan uummattootni Ittoophiyaa sirna Wayyaanee balleessanii bilisummaa gonfachuudhaaf taasisan “jibba uummata Tigree” irratti kan hundaaye fakkeessuu akka yaalaa turan hubatameera; qabsoo amma gaggeeffamaa jirus jibba uummata Tigray irratti kan hundaaye fakkeessaa akka jiran ni beekama. Hooggantootni Wayyaanee kana biras darbanii deemuudhaan yoo isaan taayitaa irra jiraachuu baatan uummatni Tigraay rakkoo guddaa keessa akka seenu (kana jechuun, yakki isaan amma uummattoota biyyittii biraa irratti raawwachaa jiran gaafa isaan taayitaa irra bu’an uummata Tigraay irratti kan raawwatamu) taasisanii sodaachisaa jiru. Dhugaan jiru garuu kana irra baay’ee fagoo dha. Uummatni Tigraay hooggantootni Wayyaane har’a mootummaa qabatanii biyya bitaa jiran otoo hin dhalatiin (otoo hin jiraatiin) ummattoota Itoophiyaa biraa wajjin biyya waliinii tokko keessa jaalala, obbolummaa fi walkabajuudhaan jiraachaa akka ture beekamaa dha. Yakka hooggantoota Wayyaaneetiin waggoota digdamii-shanan darbaniif raawwatamaa turetu uummattoota keenya addaan baasee akka ija wal shakkuu fi ija jibbaatiin wal ilaalan taasise malee uummattootni Itoophiyaa kamiyyuu kaabaa amma kibbaatti, bahaa amma dhihaatti, walakkeessa biyyaatii amma daangaatti akka diinaatti wal ilaalanii hinbeekan. Badii Wayyaaneen amma adeemsisaa jirtu irraan kan hafe qaamnumti (dhaabnumti) siyaasaa kamiyyuu ammoo uummata tokko akka uummataati diina uummata biraati jedhee hin beeku. Qabsoon amma naannoo Oromiyaa fi Amaaraa akkasumas naannoowwan biyyittii biraa keessatti adeemsifamaa jiru uummattoota Itoophiyaa hunda, ummataa Tigraayis dabalatee, sirna ukkaamsaa fi cunqursaa Wayyaanee jalaa bilisa baasuuf kan gaggeeffamuu dha. Qabsoon uummata Oromoo inni ji’oota kudhan lakkofsises ta’ee qabsoon uummata Amaaraa deeggarsa dhalattoota Tigraay tokko tokko kan argateefis xiyyeeffannaan isaa akka hooggantootni Wayyaanee fakkeessuu yaalan sochii jibba uummata Tigraay irratti hundaaye ijaa hin taaneefi. Kanaafuu, qabsoon adeemsifamaa jiru qabsoo haqaa kan uummattoota Itoophiyaa hunda bilisa baasu waan ta’eef uummata cunqurfamaa Tigraay dabalatee uummattootni biyya Itoophiyaa hundiyyu qabsoo bilisummaadhaaf taasifamaa jiru irratti akka qooda gahaa ta’e fudhatan irra deddeebinee waamicha waliinii dhiheessina.
3. Waantota guyyaa guyyaadhaan raawwatamanii fi odeeffannoowwan dhagahaman irraa akka hubannutti biyyi keenya haala baay’ee nama yaaddessuu keessa jirti. Haala yaaddessaa ta’e kana gara tolutti geeddaruu yoo dadhabne ammoo, kan biraa hafnaan jireenyi biyyittii mataan isaayyuu yeroon itti gaaffii keessa galu fagoo ta’uu dhiisuu danda’a. Badii biyyaa kana yaalii qaama tokkoo duwwaadhaan hambisuun waan hindanda’amneef qaamonni “dhimmi biyya sanaa nu ilaala” jedhan hunduu qooda isaan irraa eegamu fudhachuu qabu. Yeroo murteessaa ammaa kana dhaabbileewwan mootummaa gara garaa keessa muudama siyaasaatiinis ta’ee ogummaa saaniitiin tajaajila kennaa kan jiran hojjattoonni mootummaa, akkasumas loltoonni kutaaleewwan ittisa biyya gara garaa keessa jiran qaamota dhimmi biyya kanaa ilaalu keessatti akka ilaalaman wal nama hin gaafachiisu. Kanaafuu, yeroo ammaa kana qaama mootummaa Wayyaanee keessatti siyaasaan muudamuudhaanis haa ta’u ogummaa barumsa keessaniin argattaniin sadarkaa itti gaafatamummaa gara garaa qabattanii hojjachaa warri jirtan, miseensota ittisa biyyaa akkasumas miseensota poolisii warri taatan hundi, mootummaan tajaajilaa jirtan kuni biyya keenya gara badii guddaatti gaggeessaa akka jiru hubattani mooraa seenaa dogoggoraa keessaa baatanii qabsoo uummattootni biyya keenyaa bilisummaadhaaf taasisanitti akka dabalmtan waamicha keenya isiniif dhiheessina. Yakka uummata bilisummaadhaaf qabsaawaa jiru wajjin akka hin dhaabbanne isin taasisu amma hin hojjannetti ammo, balballi qabsoo bilisummaa isiniifis banaa ta’uu isaa akka hubattan barbaanna.